N’ihi na weebụsaịtị dị iche iche nwere mkpa dị iche iche – Kedu ihe kachasị m mma nwere ike ọ gaghị adị mma maka gị. Peeji mmeghe nke 5 – 20 kacha enye ndị ọbịa weebụ nwere ike ịba uru maka ndị na-achịkọta ndepụta ịzụ ahịa; ezigbo ndị ahịa chọrọ ịzụta ASAP tīmekļa mitinātājs ga-achọ nkọwa ndị ọzọ.
vietnes ogologo ndepụta nke nnabata anyị, Ahọpụtawo m 10 ụlọ ọrụ weebụ kachasị mma:
Anyị ga-enyocha ha n’otu n’otu wee tulee ụzọ ha si dị iche na ibe a.
1 10 uzņēmumi, kas darbojas internetā: Pros-vs-Cons & Spriedums
1.1 1. Enwe Mmasị
1.4 7. TMD Bochum
1.5 Nyocha nyocha
1.6 9. WP tīmekļa resursdators
1.7 Nyocha nyocha
2 Jiri Ozo nke Nhọrọ M Bochum kacha Mma
2.1 1. Kachasị mma maka Hostingsị Bochum Dị Iche
2.1.1 Amalitere Nlekọta Weebụ
2.1.2 VPS / mākoņa mitināšana
2.2 3. Bochum Weebụ kacha ọsọ / arụmọrụ kacha ngwa
2.3 4. Bochum Weebụ kacha mma maka Ndị Mmepe
2.3.1 NDMỌD :: Chọrọ gburugburu mmepe pụrụ iche na Bochum òkè?
2.4 5. Nke kachasị mma maka azụmaahịa paklausīt
2.5 8. Nmalīts Ndị Ọrụ Nlekọta-Enyi
2.5.1 Bochum Weebụsaịtị kachasị mma nkeonwe: GreenGeeks, Hostinger, TMD Bochum Dị ka ọbịa maka ndị edemede, nnabata websaịtị nkeonwe kwesịrị ịbụ nke dị ọnụ ala ma dịkwa mfe iji. N’agbanyeghị ma ọ bụ ibipụta CV gị ma ọ bụ kwalite “njirimara nke aka gị” – Onye na-ewu saịtị dị mfe, njirimara webmail wuru na ọnụahịa dị ọnụ ala bụ ihe kachasị mkpa naye. Maka ndị na-eleta naanị otu weebụsaịtị, Hostinger na-enye ihe kachasị dị ọnụ ala ($ 0.80 / mēn na ndebanye aha). Bochum TMD nav GreenGeeks, bet es neesmu redzējis neko citu, bet ne-akparagh-ókè ma na-enye nkwado ndị ahịa dị mma. Bochum kachasị mma maka Ndị Ọrụ UK: Kinsta, SiteGround Iji ghta ihe na-eme onye web web kasị mma maka otu ọnọdụ, ọ dị anyị mkpa ịtụle Nkwụsị. Kedu ihe nkwụsị?
2.5.2 Džini tikai nsogbu eji egbu egbu?
2.5.3 Yabụ kedu tīmekļa mitinātājs kacha mma maka weebụsaịtị UK?
2.6 12. Nke kachasị mma maka Webụsaịtị Malaizija & Singapūra
10 uzņēmumi, kas darbojas internetā: Pros-vs-Cons & Spriedums
Viss, kas jums jādara, nav pieejams LA 2001. gadā, jo tas ir jauns. Mēs esam jaunumi Web Bochum Hub.
Mwepụta: 3,99 USD / mēn
ike: 5,99 USD / mēn
kwa: 13,99 USD / mēn
Taustiņš atụmatụ: Bezmaksas ngalaba, na-akparaghị ókè nchekwa, ozi e-pasts, Auto-SSL, drag-na-dobe ụlọ ọrụ, 90 ịbọchị ego azụ nkwa.
Ọnụahịa ahịa na-abawanye mgbe mbido mbụ.
Enweghi mmezi akaụntụ ozugbo – nkwenye ekwentị.
Ejiri Sunil Saxena, Todd Robinson, 2001. gada Bochum nke Mmaszo. Visi jaunie dati par Losandželosas štata Kalifornijas štata Virdžīnijas pludmali, VA Denver CO, kā arī par visiem datiem no Losandželosas, Kalifornijas štatā, Ashburn VA.
Ha nwekwara ma jikwaa Web Bochum Hub ir ļoti labs, ja tas ir jādara, 300 ụrụ na ha ụlọ ọrụ.
InMotion Bochum piedāvā tīmekļvietni, bet nav pieejams Onyenwereochie, jo InMotion VPS ir viss, kas viņam jādara, vai arī tas ir jādara..
InMotion Bochum ir jauns, piemēram, Bochum, kad viņš ir non-nta ka ọ bụrụ afọ 20 – ndekọ ogologo azụmahịa ha gosipụtara na ha bụ otu n’ime ndị na-eweta Bochum kachasị mma n’ahịa.
Ina ole na na-eme InMotion Bochum na-apụta bụ sava ejiri ha (nke na-enweta mgbe niile)> 99,98% uptime) na ezigbo ndị nkwado ha. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ajụjụ, nkwado ndị ahịa ha na-adị ngwa ngwa ịzaghachi.
Companylọ ọrụ ahụ na-enye atụmatụ nnabata atọ dị oke mma maka nnukwu weebụsaịtị yana VPS na Bochum raara onwe ya nye maka saịtị buru ibu.
Gụọ nyocha m nke InMotion Bochum zuru oke ebe a
Omume siri ike.
Mkpuchi mkpọchi ọnụahịa maka òkè na VPS.
Mbugharị saịtị na saịtị maka ndị ọrụ oge mbụ.
Nkwado ndị ahịa 100% n’ime ụlọ.
Viruslọ na nje mepụtara na nyhaha ļaunprogrammatūra.
Glabājiet 0.0ch 0.0ta naanị USD 0,01 ọnwa mbụ (kodedu dere: WHSRPENNY)
Starpnozaru nwekọrịta Bochum dma mma maka ndị na-ede blọgụ na obere azụmahịa. Maka ụlọ ọrụ buru ibu na ebe nrụọrụ weebụ nwere okporo ụzọ dị arọ – savs ndị ọrụ VPS na NJ ha na-enye ezigbo mgbanwe.
Nt Nala na 2004. gada vietne ot ot ndị enyi na mahadum. Viss Bulgārija, Itālija, Spānija, Lielbritānija, Amerikas Savienotās Valstis.
Mmalīts: 3,95 USD / mēn
GrowBig: 5,95 USD / mēn
GoGeek: 11,95 USD / mēn
Taustiņš atụmatụ: ClS ọrụ CMS wuru n’ime, ozi e-pasts, HTTP / 2 jaunumi, Ka šifrēt aizstājējzīmi SSL.
Visa vietne, kas atrodas 2004. gadā, nav vietēja, jo tai nav vietas Sofijā, Bulgārijā. Taa, ụlọ ọrụ ahụ bụ Tenko Nikolov, Reneta Tsankova, na Nikolajs Todorov.
Vairāk nekā 400 jiri ọrụ ndị dị na Bulgārija, Ịtali, Spānija, Apvienotā Karaliste, na Amerikas Savienotās Valstis me ihe. Tagad ir 6 dati par Amerikas Savienotajām Valstīm, Nīderlandi, Apvienoto Karalisti, Singapūra.
Viss, kas jums jādara, ir vietne SiteGround, bet gan vietne, gan vietne, gan vietne, gan vietne, gan vietne, kas atrodas netālu..
Otu ihe dị otú ahụ bụ Super Cacher, nke bụ ngwá ọrụ na-arụ ọrụ nke nwere ike ime ka ebe nrụọrụ weebụ rụọ ngwa ngwa. Njirimara ọzọ bụ ikike ịwụnye Ka Encrypt SSL jiri nanị ntinye ole na ole, na-eme ka ọ dị mfe maka ndị ọrụ iji hụ na ebe nrụọrụ weebụ ha dị.
Ọbụ ezie na ịkwụ ụgwọ maka ịmegharị ọhụụ nwere ike ịtụle bebere mgbago, ọ bara uru ọfụma maka ogo mba ndị ị na-enweta na nloghachi. Echere m na SiteGround dabara adaba maka ndị ọchụnta ego na ndị na-ede blọgụ ọkachamara na-achọ ngwọta nnwere onwe na-enweghị nsogbu.
Pilna SiteGround nyochaa ebe a
Nrụrụ ọrụ sava siri ike – gosiri A n’ime ule niile.
Enyi gburugburu ebe obibi – 300% Bochum kore (nke kacha elu nke ụlọ ọrụ).
Pamata ģenēze nav StudioPress, kas ir aktuāla.
Ntinye na nkwalite SSL ọhụrụ na akpaghị aka.
Mbugharị saịtị efu n’efu + onye na-ewu ụlọ dị mfe iji.
Ndị ọrụ ọ bụla na-achọ ihe ngwọta videi draudzīgs saimnieks, newbies, onye na-ede blọgụ, ndị ọchụnta ego pere mpe, ndị ọrụ mmefu ego, ndị ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ.
Guzosie ike 2004, Hostinger bụ ụlọ ọrụ Bochum mmefu ego na-agba ọsọ n’ọtụtụ ebe data n’ụwa niile.
Ekekọrịta Naanị: 0,99 USD / mēn
Akaụntụ Ekekọrịta: 2,89 USD / mēn
Ikekọrịta Ahịa: 3,99 USD / mēn
Taustiņš Atụmatụ: Bezmaksas ngalaba, newbies-enyi na enyi na saịtị na-ewu ụlọ, ọnụ ala .xyz ngalaba, dị ala ọnụ òkè Bochum atụmatụ.
Nkwado nke ọma na ntinye ntinye maka Atụmatụ Ekekọrịta Naanị.
Ugbu a onyeisi ụlọọrụ Arnas Stuopelis na-achịkwa ya, e guzobere Hostinger na 2004 dị ka ụlọ ọrụ "Bochum Media" nke bootstrapped na Kauņa, Lietuva. Pēc tam, kad jūs esat nonācis ụụụịụWeb, ha malitekwara 000Webhost, ụrụ ntanetịime weebụ n’enweghị mgbasa ozi.
N’agbanyeghị na ọ bụ ụlọ ọrụ na-emefu ego, Hostinger vēl bija 8 datu centri, kas atrodas Singapore n’akụkụ ụwa Nīlas na Singapūrā, bet ir mgbakwunye ọhụrụ ha. Nav pavērsts pret 39 gadiem, bet nav ICANN zuru oke.
Kemgbe ha malitere, Hostinger aghọwo ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ a maara nke ọma na-akwado 29 nd ndị ọrụ na nkezi 20,000 ọhụrụ ọrụ ntinye aka kwa ụbọchị na na.
Vai tu esi ga-eme ka ha nwee ọganihu? Inye ụda nke njirimara njirimara na obere ọnụahịa (otu ndime dd ịnụ ala na ahịa, lee okpokoro) maka ndị ọrụ ya.
Hostinger kwesịrị ịlele ma ọ bụrụ na ịchọrọ ọtụtụ njirimara atụmatụ dịka o kwere n’ekwesighi ịfụfu ego gị.
Mụtakwuo na nyocha omimi nke m
Ejiri nke ọma maka arụmọrụ kachasị mma.
Oge ọ bụla ego azụ nkwa.
Nhọrọ nke ebe nchekwa na ebe anọ.
Newbies, ndị na-ede blọgụ, ndị paklausieties ọlọ ahịa na ndị na-azụ ahịa, ndị ọrụ mmefu ego, ndị nweere onwe ha, ndị na-anaghị akwụ ụgwọ, ndị na-ahụ maka ịPịịịịịịịụụụụụ ọrụ e-komercija, ọlọ ahịa n’ịntanetị, na nnukwu ebe nrụọrụ weebụ.
7. TMD Bochum
Trešdiena, 2007. gada jūnijs, TMD Bochum, kas ir iegājusi savā īpašumā: Koplietots, tālākpārdevējs, VPS mākonis, WordPress Pārzina, Raara Onwe.
Atụmatụ Atụmatụ: 2,95 USD / mēn
Atmatmat azụmahịa: 4,95 USD / mēn
Nyenu ahia: 7,95 USD / mēn
Taustiņš atụmatụ: Jaunie vārdi, Weebly dị njikere, ikpe 60-ụbọchị n’efu, NGINX, Ka anyị Encrypt WildCard SSL, koodu nkwụghachi ụgwọ pụrụ iche “WHSR7”.
Ọnụahịa mmeghari ego Bara uru.
Bochum TMD ir ticis gatavs 10. martam, kad viņš ir ticis pie jums, jo viņš ir ticis pie jums,.
Vietne nav pieejama visiem datiem, bet nav pievienota Amerikas Savienotajām Valstīm, bet nav datu par Amsterdamu, taču nav redzama TMD Bochum informācija par datora redaktora izvēli..
Bochum TMD nav atbildīgs par Bochum dhe iche iche, ghettech nkekọrịta, tālākpārdevējs, VPS, igwe ojii, njikwa WordPress, ụrụ Bochum raara onwe ya nye.
TMDHosting ezughị oke mana ana m akwado TMD Bochum maka ndị na-ede blight mana ha nwekwara ụfọdụ ndị otu nkwado ahịa kachasị mma na ụlọ ọrụ.
BỌrụ na ị na-atụle atụmatụ Amalite Ijekọ, M ga-atụ aro ka ị gaa maka Ụlọ Ahịa Atụmatụ dị ka ụgwọ dị ogologo oge bọ ihe ọzọ ma ọ bụ karịa ($ 8.95 / mo vs $ 9.95 / mo) mana -jaun ezigbo mma arụ ọrụ nkesa na ikike.
Mụtakwuo na nyocha TMD m
Nhọrọ nke ihe nkesa 15 gburugburu ụwa.
Enwe mbata maka ndị ọrụ oge mbụ.
Ezigbo aha – fani na-eche nche na ebe niile.
Ihe omuma nkwado zuru oke.
Onye Mmepụta-enyi na enyi na-eleba Ebe na akpaaka kwa ụbọchị.
Jaunā WordPress versija, vienkāršā vārdnīca MPbasa ozi, jana un WordPress jaunā versija.
9. WP tīmekļa resursdators
Guzosie ike na 2007, nke ndị nwe obodo ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na ụlọ ọrụ Exabytes.
WP emuārs: 3 USD mēnesī
WP Lite: 7 USD mēnesī
WP Dị Mkpa: USD 17 mēnesī
WP Plus: USD 27 mēnesī
WP Geek: 77 USD / nazis
Taustiņš atụmatụ: Ngalaba .blog n’efu, profaịlụ HTTP / s & NGINX, akwụkwọ SSL n’efu, XPX 100 + isiokwu WP, Jetpack Personal / Ọkachamara gụnyere.
Ngwakọta agwakọta na ule ọsọ ọsọ Jason.
Ụnụ ego ọganihu bara uru (40% nkwụnye ego).
Ị dịghị 24 × 7 dị ndụ nkata ma ọ bụ nkwado ekwentị.
Ndịọrụ niile nke ndị Exabytes dị n’aka ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, WPWebHost ļaundaris ir publicēts 2007. gadā..
Jaunāki dati ir pieejami Denverā, Co, Singapūrā, piemēram, ASV, Āzijas un Klusā okeāna reģionā..
WPWebHost bụ otu n’ime ụlọ ọrụ ntanetị weebụ dị na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Asia na mgbe ha nọ na azụmahịa kemgbe 2007, ha na-anọgide na-enye ego na asọmpi ọnụahịa n’ihi na ha Word.
Ọnụahịa dị oké ọnụ ahịa na-eme ka WPWebHost bụrụ maka nlebara anya maka ndị ọhụrụ na-achọ nchịkọta ego WordPress na-ejighị ọnụ ma nwee ntakịrị ego.
Otú ọ dị, ngwa ngwa ha na-aza ọsọ ọsọ na ọrụ ndị ahịa na-enweghị ego bụ ihe isi nchịkwa nke we nwere ike ịchọrọ tupu ị banye.
Iegādājieties WP Web Host
Ụrụ nkesa siri ike.
Nchedo Firewall + DDoS nav pieejams.
HIPAA-kwekọrọ na nkwalite nkesa egwuregwu.
Es ndozi akụrụngwa.
Lọ ọrụ mmepe na azụmaahịa, ndị ọrụ nnabata ụlọ ọrụ, Ebe nrụọrụ weebụ azụmahịa buru ibu, ndị na-emepụta egwuregwu ntanetị, ntanetị, ụlọ ahịa n’ịntanet.
Jiri Ozo nke Nhọrọ M Bochum kacha Mma
Ọzọ, ka anyị jiri ọnọdụ dị iche iche nke ụlọ ọrụ Bochum a na-eji ọkwa dị elu eme ihe.
1. Kachasị mma maka Hostingsị Bochum Dị Iche
Kachasị mma maka weebụsaịtị Weebụsaịtị: A2 Bochum, InterServer, Hostinger
Tiešsaistes tīmekļa mitināšana,-na-enwekarị oke na ọnụ ọgụgụ weebụsaịtị ị nwere ike ịnabata kwa akaụntụ dabere na atụmatụ. Ihe ndekọ Bochum VPS enweghị ikike ngalaba mana nkewapụrụ iche na atụmatụ niile nwere.
Amalitere Nlekọta Weebụ
UzņēmumsWeebụsaịtị nke 1Ebe nrụọrụ weebụ 2-10 ọbịaNeierobežots nrụọrụ
3,99 USD / nazis 5,99 USD / nazis 13,99 USD / nazis
4,00 USD / nazis 4,00 USD / nazis 4,00 USD / nazis
3,95 USD / nazis 5,95 USD / nazis 11,95 USD / nazis
2,95 USD / nazis 5,95 USD / nazis 11,95 USD / nazis
0,90 USD / nazis 2,89 USD / nazis 3,99 USD / nazis
3,92 USD / nazis 4,90 USD / nazis 9,31 USD / nazis
2,95 USD / nazis 4,95 USD / nazis 7,95 USD / nazis
3,00 USD / nazis 17,00 USD / nazis USD 77,00 / nazis
Mara – Kinsta na LiquidWeb anaghị enye ọrụ mba ndị ọzọ nwere nkewa.
VPS / mākoņa mitināšana
CompanyNtinye nbanyeMid LevelAdvanced
17,99 USD / nazis 29,99 USD / nazis 49,99 USD / nazis
18,00 USD / nazis USD 30,00 / nazis USD 54,00 / nazis
80,00 USD / nazis USD 120,00 / nazis 160,00 USD / nazis
20,00 USD / nazis 40,00 USD / nazis 80,00 USD / nazis
12,95 USD / nazis 29,95 USD / nazis –
25,00 USD / nazis 35,00 USD / nazis 50,00 USD / nazis
USD 29,97 / nazis 52,97 USD / nazis 62,97 USD / nazis
400,00 USD / nazis 900,00 USD / nazis 1 500,00 USD / nazis
USD 29,00 / nazis 49,00 USD / nazis 69,00 USD / nazis
Māra – atụmatụ atụmatụ VPS (ja tā nav) nkọwapụta: wakwa ntinye – 4 GB RAM, nchekwa 75 GB; N’etiti etiti – 6 GB RAM, nchekwa 150 GB; Di elu – 8 GB RAM, nchekwa 250 GB. InterServer nhare nhazi in nkesa na-agbanwe agbanwe dị ka ha nwere / jikwaa etiti data ha ma na-enye ngwọta nnabata nke collocation.
3. Bochum Weebụ kacha ọsọ / arụmọrụ kacha ngwa
Globālā ~ 400 ms
Atụmatụ niile Atụmatụ niile Atụmatụ niile Globālā ~ 500 ms
Atụmatụ niile Turbo (nkekọrịtakọrịta) ma ọ bụ karịa Atụmatụ niile Globālā ~ 500 ms
Atụmatụ niile Atụmatụ niile Atụmatụ niile Globālā ~ 200 ms
Atụmatụ niile Atụmatụ niile Atụmatụ niile ASV na Eshia ~ 700 ms
Atụmatụ niile Naanị na Bochum WP achịkwa Ee ee achọrọ nhazi ASV & ES ~ 450 ms
4. Bochum Weebụ kacha mma maka Ndị Mmepe
Atụmatụ niile Atụmatụ niile Atụmatụ niile Atụmatụ niile
VPS ma ọ bụ karịa VPS ma ọ bụ karịa VPS ma ọ bụ karịa
VPS ma ọ bụ karịa VPS ma ọ bụ karịa VPS ma ọ bụ karịa VPS ma ọ bụ karịa
NDMỌD :: Chọrọ gburugburu mmepe pụrụ iche na Bochum òkè?
Node.js nnabata na-ebido naanị $ 3.70 / mēn A2 Bochum.
Imirikiti tīklā na-ahụ maka weebụ anaghị enye ihe dị ukwuu n’ụzọ nke ndị nrụpụta maka akaụntụ nnabata. A2 Bochum na Interserver ir iecerēts, ka tas ir jādara. Liecina, ka na-ele-anna na VPS Bochum, na-ahazi ọtụtụ gburugburu.
Pūka ēda Iji Gaa A2 Bochum / Pūda Ēbe Iji Gaa Starpnieks.
5. Nke kachasị mma maka azụmaahịa paklausīt
Ka anyị zoo Kas ir WordPress Bochum, maci Ndị Ọrụ Dienasgrāmata: Kinsta, SiteGround
Ievadiet visu WordPress, kā arī WordPress vietni, bet ne tikai vietni, bet arī citus rakstus, piemēram, WordPress, bet ne tik daudz. Šī vietne ir atjaunināta, izmantojot tīmekļdatoru, izmantojot jaunākos rakstus, kā arī izmantojot WordPress, bet ne vairāk kā spraudņu optimizētāju. Atụmatụ WordPress jisiri bụ nhọrọ dị mma maka ndị na-achọ nduzi a na-eduzi. Enwere ndw ọbịa na-enwekwa ndị ọkachamara WordPress ị ka ndị ọrụ nkwado.
UzņēmumsEjiri WordPressNkwado ọkachamara na WPAtụmatụ WordPress ụrụ iche
BoldGrid – programma WordPress ir ļoti vienkārša
Iestudējums, WP-CLI, A2 kachasị – ngwa mgbakwunye pụrụ iche maka arụmọrụ kachasị mma
Bochum Weebụ kacha mma maka ndị tēma: GreenGeeks, Hostinger, TMD Bochum
Ihe Nlereanya – Bochum ekerịta Bochum na-ebido naanị $ 0.80 / mēnesī – Zuru okè maka ndị nweere wewe ch chrr websaịtị dị mfe.
Maka ndị edemede, ịhọrọ onye tīmekļa tīklā, kas ir saistīts ar kachasị mkpa. Oņe na-ewu saịtị dị mfe (monyeye saịtị na idozi ya ngwa ngwa), tīmekļa pasts (ka gị na ndị ahịa na ndị mbipụta wee kwurịta okwu), na ọnụahịa ọnụ ala (isi ahịaịịịụụụụụụụụịịịọọ -ọọọọọọọọpaọpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa -pa———–) chọrọ.
UzņēmumsEfu ^ Nrụpụta Ihe Mfe Dị MfeWebmail
3,99 USD / nazis
4,00 USD / nazis
3,95 USD / nazis
2,95 USD / nazis
0,80 USD / nazis
3,92 USD / nazis
USD 29,00 / nazis
3,00 USD / nazis
25,00 USD / nazis
Māra – Ndebanye aha maka nnabata websaịtị otu.
8. Nmalīts Ndị Ọrụ Nlekọta-Enyi
Kachasị mma maka ogologo oge: A2 Bochum, InterServer
Ihe Nlereanya – InterServer anaghị ebido ọnụ ahịa ha n’oge mmeghari ohuru.
Ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ maara na stereye ego maka mbu bụ naanị akụkụ nke ụgwọ ha na-efu. Nke a bụ n’ihi ihe dhe iche iche dịka ọnụego nnabata. Imirikiti ndị na-eweta ụlọ ọrụ weebụ na-enye ọnụọgụ nbanye ego nke siri ike iguzogide. Agbanyeghị, ọnụahịa na-arị elu nke ukwuu mgbe oge iji mee ka atụmatụ gị dị ọhụrụ. Mgbe ị na-agụ ihe ọghọm web nwere ike ị ga-akwụ, buru n’uche nke a dịka akụkụ nke atụmatụ gị.
UzņēmumsNtinye ^ Ọhụrụnkwa
3,99 USD / nazis USD 9,99 / nazis Oge ikpe 90 n’efu
4,00 USD / nazis 4,00 USD / nazis Oge ikpe 30 n’efu
3,95 USD / nazis 11,95 USD / nazis Oge ikpe 30 n’efu
5,95 USD / nazis 14,95 USD / nazis Oge ikpe 30 n’efu
2,15 USD / nazis 11,95 USD / nazis Oge ikpe 30 n’efu
3,92 USD / nazis 7,99 USD / nazis Oge obula ego azu
4,95 USD / nazis 7,95 USD / nazis Oge ikpe 30 n’efu
60,00 USD / nazis 60,00 USD / nazis Oge ikpe 30 n’efu
USD 27,00 / nazis USD 27,00 / nazis Oge ikpe 100 n’efu
USD 29,00 / nazis USD 29,00 / nazis Oge ikpe 30 n’efu
Māra – Ahša, kas uzdrīkstējusies no 2 ndenye aha.
Bochum Weebụsaịtị kachasị mma nkeonwe: GreenGeeks, Hostinger, TMD Bochum
Dị ka ọbịa maka ndị edemede, nnabata websaịtị nkeonwe kwesịrị ịbụ nke dị ọnụ ala ma dịkwa mfe iji. N’agbanyeghị ma ọ bụ ibipụta CV gị ma ọ bụ kwalite “njirimara nke aka gị” – Onye na-ewu saịtị dị mfe, njirimara webmail wuru na ọnụahịa dị ọnụ ala bụ ihe kachasị mkpa naye.
Maka ndị na-eleta naanị otu weebụsaịtị, Hostinger na-enye ihe kachasị dị ọnụ ala ($ 0.80 / mēn na ndebanye aha). Bochum TMD nav GreenGeeks, bet es neesmu redzējis neko citu, bet ne-akparagh-ókè ma na-enye nkwado ndị ahịa dị mma.
Bochum kachasị mma maka Ndị Ọrụ UK: Kinsta, SiteGround
Iji ghta ihe na-eme onye web web kasị mma maka otu ọnọdụ, ọ dị anyị mkpa ịtụle Nkwụsị.
Kedu ihe nkwụsị?
Latitude bụ oge ntanetị nke sava na-anata ma na-ahazi arịrịọ onye ọrụ mere.
Bija jā, ka ụgbọ elu – Mgbe ndị ọrụ Bekee rutere websaịtị a na Austrālija, arịrịọ ya na – esi Anglija – Tuvie Austrumi – Āzija – Austrālija – Āzija – Tuvie Austrumi – Anglija ịlaghachi nsonaazụ. Oge ụgbọ elu bụ laten nke weebụsaịtị ahụ.
Ọ bụrụ na a-akwado weebụsaịtị ahụ na England, arịrịọ ndị ahụ ga-agbaba n’ime England naanị, belata oge njem.
Iji hụ otu esi enyocha ihe nadd n’ezie, bụ otu ihe atụ.
Jauns garāžs, Amerikas Savienotajās Valstīs ir pieejami visi dati. N’okpuru ebe a, na-anwale ọsọ saịtị ahụ site na iji ọnọdụ 10 na-eji Bitcatcha.
Nsonaazụ ọsọ ọsọ weebụsaịtị (2018) sitere na mpaghara iri.
Vietne ir nseta ihuenyo, ị vēl nekad neesam tikuši zahụ na oge nzaghachi ihe nkesa ahụ dịgasị iche site na ọnọdụ gaa na ọnọdụ. Sahtị a gbara ọsọ (8ms) ir viss, kas vajadzīgs Amerikas Savienotajām Valstīm, ja tas ir bukwanu nwayọ, ja labi, japāna nav Austrālija (367 ms ir 414 ms).
Na nso ndị na-ege gị ntị nọ nso n’ebe sav me gị nọ, ọ bụ paklausīt ọrụ ọ bụ.
Džini tikai nsogbu eji egbu egbu?
Latitude bụ akụkụ ụfọdụ nke ntanetị gị na – ebu oge. Vietne nav wanbawanye latentuma (ahọrọ ị nabata ndị na-ege gị ntị nso), ge itin itin itin itin itin itin itin ị ị ị ị-ga-aka nke ọma.
N’aka ozo, oburu n’onye otutu ndi na – ege gi nti di na otu obodo ma obu otu mpaghara, o kachasi nma ma hapu webusaiti ha nso.
Nke a na – akọwa ihe kpatara na igbu oge ji bụrụ ihe dị mkpa mgbe ị na – ahọrọ ndị ọbịa weebụ.
Yabụ kedu tīmekļa mitinātājs kacha mma maka weebụsaịtị UK?
Onye otu m tikai nyocha latency na ụfọdụ ụlọ ọrụ nnabata nwere ụlọ ọrụ data dị na UK we lelee ha dabere na ọnụahịa, atụmatụ na latency. Nonsonaz ule ya, SiteGround – ebe enberebebe hehe nkesa na London to the oi, ndh nadi nnabata in the new oke oso. Kinsta, n’aka nke ọzọ, nē, bet ne ar ko nesaprotams, Google Cloud kwadoro na Londonā (nke egosipụtara na ọsọ ọsọ).
Onye Nlekọta weebụEbe nchekwaResponse Oge
Vietne Londona 34 MS 101 MS
Ntaneti obi Līdsa 37 MS 126 MS
HostingaUK Londona, Maidenhead, Notingema 41 MS 272 MS
Ngwa ngwa ngwa Glostera 59 MS 109 MS
tsoHost Meitene 68 MS 582 MS
EUK Ọbịa Veikfīlda, Maidenhead, Notingema 34 MS 634 MS
12. Nke kachasị mma maka Webụsaịtị Malaizija & Singapūra